Fifanarahana fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa farany | AudioSourceRE
Fifanarahana LICENSING END-USER (EULA)
Ity dia fifanarahana ara-dalàna AudiosourceRE DAC (izay antsoina ankehitriny AudioSourceRE) ary ianao, ny mpampiasa farany (antsoina hoe ity dia ny Lisansa) amin'ny fampiasana ny AudioSourcere rindrambaiko sy rindrambaiko an'ny antoko fahatelo rehetra izay miaraka amin'ity fifanarahana ity, ao anatin'izany ny haino aman-jery rehetra mifandraika amin'izany, atiny sy serivisy an-tserasera (fantatra amin'ny anarana hoe "Lozisialy manana lisansa").
MBA VAKIO TSARA IZAO IANAO LISENY ALOHA ATAON'NY fampiasana ny SOFTWARE. AMIN'NY FAMPIASANA NY SOFTWARE, MANAIKY ANAO HATAON'NY FITENY IZAO IANAO. RAHA TSY MANAIKY NY FITENIN'IZAO LISENY IZAO, AZA MAMETRAKA, MANARAKA NA MAMPIASA NY SOFTWARE LISY. Avereno kely ity toerana ity, dia avereno any amin'ny toeram-pividianana ianao.
Raha nividy ilay rindrambaiko tamin'ny alàlan'ny tranokalanay izahay dia jereo Fepetran'ny varotra sy ny politikan'ny mpanjifa.
1. Kopia avy amin'ny antoko fahatelo Profifampiresahana sy fampahalalana momba ny angona manokana Protection.
AudioSourceRE mampiasa rindrambaiko PACE Anti-Piracy, Inc., rindrambaiko protection. PACE dia orinasa antoko fahatelo miorina ivelan'ny EU / EEA. Raha hampiasa ny rindrambaiko dia tsy maintsy manana kaonty fiarovana Pace / ilok ianao. Mba hahazoana kaonty avy amin'ny PACE dia mila proalefaso amin'ny data manokana izy ireo. Raha tsy tianao ny hanao izany dia tsy ho afaka hampiasa ny rindrambaiko izahay.
Ny rindrambaiko promanome ny fomba fampiasana ny rafitra Pace / iLok, ary koa ny fomba hanokafana ny tranokalanao ary hanombohana ny famoronana kaonty ho anao. Amin'ny fanekena ireo fepetra ireo dia manaiky ianao fa takatrao ary ekenao fa rehefa mampiasa ireo fotodrafitrasa ireo ianao dia mifampiresaka amin'ny PACE ary iharan'ny politika sy ny fampiasa amin'ny fiainany manokana.
Afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny AudioSourceRENy politika momba ny tsiambaratelo ao amin'ny www.audiosourcere.com / ny fiainana manokana
Amin'ny alàlan'ny fanafarana lakile fahazoan-dàlana AudioSourceREtranokala na amin'ny alàlan'ny fametrahana na fampiasana ny Lozisialy manana fahazoan-dàlana, ianao dia manaiky fa voafatotry ny fehezan'ity fifanarahana fahazoan-dàlana ity amin'ny ankapobeny.
2. Fanomezana ny fahazoan-dàlana
AudioSourceRE manome fahazoan-dàlana hampiasa ilay rindrambaiko amin'ny profahitana fa ianao, ny Lisansa dia manara-dalàna amin'ny fepetra sy fepetra rehetra amin'ity EULA ity. Ny fahazoan-dàlana dia fahazoan-dàlana manokana, tsy miankina ary tsy azo nafindra, tsy manan-jo hanome lisitra, hametraka sy hampiasa kopia iray an'ny Lozisialy manana alalana amin'ny solosaina iray na fitaovana hafa amin'ny fotoana iray. Ny fampiharana, fampisehoana, rafitra ary rindrambaiko hafa ary fitaovana miaraka amin'ity Lisansa ity, na amin'ny kapila, amin'ny fahatsiarovana vakiana fotsiny, amin'ny alàlan'ny EDD (Electronic Digital Download) dia mahazo alalana aminao AudioSourceRE sy ireo manana fahazoan-dàlana. Ianao no manana ilay kapila nanoratana ny lozisialy fa AudioSourceRE sy / na ny AudioSourceREIreo manana fahazoan-dàlana dia mitazona ny lohatenin'ny lozisialy, sy ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'izany, ary ny fitaovana.
Ny fahazoan-dàlana dia afaka manao dika mitovy amin'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana amin'ny endrika azo vakina amin'ny milina ho an'ny tanjona famerenana fotsiny, pronihevitra fa ity kopian'ny backup ity dia misy ny copyright rehetra sy ny hafa profampandrenesana praiminisitra voarakitra ao amin'ny lozisialy nahazo alalana.
Ny fehezan'ity fifanarahana fahazoan-dàlana ity dia hitantana izay fanavaozana, fanavaozana, fanampiana ampiana na serivisy an-tserasera amin'ny lozisialy nahazo alalana AudioSourceRE mety promisafidy ny Tompon'ny fahazoan-dàlana raha tsy miaraka amin'ny fifanarahana fahazoan-dàlana hafa ireo. AudioSourceRE miaro ny zon'ny hanajanonana ny iray amin'ireo serivisy voalaza etsy ambony amin'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana.
Ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia mety ahitana singa Eoropeana sasany (oh: rakitra audio, sary sns.) Hampiasaina ilay manana fahazoan-dàlana, saingy tsy mahazo mivarotra, manome fahazoan-dàlana na mizara ny kopian'ireto haino aman-jery ireto irery na koa izy ireo ho ampahany voalohany amin'ny fanangonana. profantsona na serivisy.
3. Fepetra amin'ny fampiasana
Ny lozisialy dia misy fitaovana misy zon'ny mpamorona, tsiambaratelo momba ny varotra, ary hafa profitaovam-pianakaviana. Ny fahazoan-dàlana dia tsy afaka mamongatra, manala na mamadika injeniera ny Lozisialy manana fahazoan-dàlana, afa-tsy amin'ny alàlan'ny lalàna azo ampiharina mazava tsara na dia eo aza io fetra io. Tsy azonao atao ny manova, manofa, manofa, mampindrana, mizara na mamorona sanganasa mifototra amin'ny lozisialy amin'ny manontolo na amin'ny ampahany na promanolotra serivisy fampiantranoana ara-barotra miaraka amin'ny AudioSourceRE Rindrambaiko manana fahazoan-dàlana.
Ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia azo ampiasaina indrayprofitaovana fanalefahana. Nahazo fahazoan-dàlana ho an'ny Tompon'ny fahazoan-dàlana fotsiny ho an'ny reprofanesorana ireo fitaovana na fitaovana tsy misy zon'ny mpamorona izay manana ny zon'ny mpamorona ny Fahazoandàlana na ny fahazoan-dàlana na nahazo alalana ara-dalàna na tsiapromampihena sy mamorona sanganasa derivative amin'izay fitaovana kopian'ny mpanoratra. Tompon'andraikitra irery amin'izany ny Tompon'antoka profanasitranana alalana sy alalana alohan'ny famoronana sy famoahana ny derivatives vita amin'ny fitaovana vita an-tsoratra ary tompon'andraikitra sy tompon'andraikitra amin'ny valiny sy ny vokany rehetra avy amin'ny tsy fanatanterahana izany, anisan'izany ny fahasimbana nitranga, manokana, ankolaka na vokatr'izany, anisan'izany ny tsy ferana fahavoazana ara-barotra.
4. Fiarovana ny zony sy ny fananana
Ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia protected by copyright and other intellectual prolalàna sy fifanekena. Lohateny rehetra ary ara-tsaina prozon'olombelona ao, ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia manana sy / na fehezin'ny AudioSourceRE sy / na ny AudioSourceREmpanome fahazoan-dàlana.
Ny fahazoan-dàlana dia manana ny haino aman-jery nanoratana ny lozisialy manana fahazoan-dàlana fa ny fananana ilay lozisialy manana alalana kosa dia tazonin'ny AudioSourceRE sy / na ny AudioSourceREmpanome fahazoan-dàlana.
5. Fifanekena hampiasa ny angona Fahazoandàlana
Manaiky izany ny Tompon'antoka AudioSourceRE ary ireo orinasany dia afaka manangona sy mampiasa fampahalalana ara-teknika voaangona ao anatin'ny profanohanana fantsona sy serivisy hafa mifandraika amin'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana. AudioSourceRE afaka mampiasa an'ity fampahalalana ity amin'ny improve AudiosourceRE's profantsona na mankany proserivisy na teknolojia video ho an'ny Tompon'ny fahazoan-dàlana proHita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index./
Ity fifanarahana fahazoan-dàlana ity dia manan-kery mandra-pikatona. Ny zon'ny rehetra manana ny fahazoan-dàlana ao amin'ity fifanarahana fahazoan-dàlana ity dia hitsahatra tsy misy fampandrenesana avy AudioSourceRE raha tsy manaja ny fe-potoana iasan'ity fifanarahana fahazoan-dàlana ity ny mpana Lisansa. Rehefa tapitra io fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana io dia tokony hampitsahatra ny fampiasana ny Rindrambaiko manana fahazoan-dàlana ary hanafoana ny kopia rehetra, feno na ampahany. Azonao atao ny mamarana io Lisansa io amin'ny fotoana rehetra amin'ny fanimbana ny lozisialy sy ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'izany ary ny kopia rehetra ao aminy.
7. Fiantohana voafetra
AudioSourceRE manome alalana ny haino aman-jery izay anoratana ny lozisialy manana fahazoan-dàlana ho afaka amin'ny kilema amin'ny fitaovana sy ny fiasana amin'ny fampiasana mahazatra mandritra ny sivifolo (90) andro hatramin'ny datin'ny fividianana antsinjarany tany am-boalohany. Ny vahaolana manokana an'ny Tompon'ny fahazoan-dàlana ao amin'ity fizarana ity dia, amin'ny AudioSourceRESafidy tokana, famerenana ny vidin'ny fividianana ny profantsona misy ny lozisialy manana alalana na ny fanoloana ny lozisialy manana fahazoan-dàlana izay averina amin'ny AudioSourceRE na solontena nahazo alalana avy amin'ny AudioSourceRE miaraka amin'ny kopian'ny tapakila. Ity fiantohana voafetra ity sy ny fiantohana azo antoka rehetra ao anatin'izany, saingy tsy ferana, ny fiantohana ara-barotra momba ny varotra, ny kalitao mahafa-po ary ny fahasalamana ho an'ny tanjona manokana, dia voafetra mandritra ny 90 (sivifolo) andro manomboka ny datin'ny fividianana antsinjarany voalohany ny Rindrambaiko manana fahazoan-dàlana. Ity fiantohana voafetra ity dia ny fiantohana tokana natao ho an'ny Mpisoratra anarana ary pronaseho nanolo ny fiantohana hafa (raha misy) noforonin'ny rakitra na fonosana. Ilay manana fahazoan-dàlana koa dia mety manana zon'ny lalàna hafa izay miova arakaraka ny fahefana.
Izay fanampiana, fanavaozana, fanavaozana, na serivisy an-tserasera amin'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana pronifidy ny Tompon'ny fahazoan-dàlana rehefa tapitra ny vanim-potoana sivifolo andro izay tsy voafaritry ny fiantohana na fepetra, mazava, na voarindra na ara-dalàna.
8. Fialana andraikitra amin'ny Warranty amin'ny AudiosourceRe Software
Ny Mpisoratra anarana dia nanaiky sy nanaiky fa ny fampiasana ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia atahorany irery ary ny risika rehetra amin'ny fahafaham-po, kalitao, fahombiazana, fahamarinana ary ny ezaka dia ao amin'ny Tompon'ny fahazoan-dàlana.
Amin'ny fetra farany ambony avelan'ny lalàna manan-kery, ny Lozisialy manana fahazoan-dàlana dia provided "as is", miaraka amin'ny lesoka rehetra ary tsy misy fiantohana na karazana inona na AudiosourceRE ary / na AudioSourceREIreo manana fahazoan-dàlana dia manafoana ny fiantohana rehetra sy ny fepetra mifandraika amin'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana, na amin'ny fomba mazava, na amin'ny fomba voafaritra na amin'ny lalàna, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny, ny fiantohana sy / na ny fepetra momba ny varotra, ny kalitao mahafa-po sy ny fahafaham-po ho an'ny tanjona manokana. marina sy tsy fanitsakitsahana ny zon'ny antoko fahatelo. AudioSourceRe dia tsy manome antoka na hanao fisehoana momba ny fampiasana na ny valin'ny fampiasana ny rindrambaiko sy ny antontan-taratasy mifandraika amin'ny maha-marina azy ireo, marina azy, azo itokisana, na hafa.
Tsy misy fampahalalana na torohevitra nomen'i AudioSourceRE na ny solontena nahazo alalana na iza na iza dia hamorona fiantohana na amin'ny fomba rehetra hampitombo ny haben'ity fiantohana ity. AudioSourceRE mandà izay rehetra na fiantohana mazava rehetra na inona na inona tiana holazaina ary ny mpampiasa dia miantoka ny trosa rehetra sy ny risika rehetra, amin'ny fampiasana na fampiasana ilay rindrambaiko tsy misy fetra.
Tokony ny rindrambaiko proraha tsy tomombana ny mpampiasa dia mihevitra ny vidin'ny fanompoana rehetra, ny fanamboarana na ny fanitsiana. AudioSourceRE dia tsy manome antoka indrindra, fa ny lahasa voarakitra ao amin'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia hameno ny fepetra takiana amin'ny Tompon'ny fahazoan-dàlana, fa ny fiasan'ny lozisialy manana fahazoan-dàlana dia tsy tapaka na tsy misy hadisoana na koa ireo lesoka ao amin'ny lozisialy nahazo alalana dia ahitsy.
AudioSourceRE dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimban'ny tena na noho ny fahasimbana sendra, manokana, ankolaka na vokatr'izany na inona na inona, ao anatin'izany, tsy misy fetra, fahasimbana noho ny fahaverezan'ny profitoviana, fahaverezan'ny angona, fahatapahan'ny asa aman-draharaha na fahasimbana na fatiantoka ara-barotra hafa, nipoitra avy na misy ifandraisany amin'ny fampiasana na ny tsy fahaizana mampiasa ny Lozisialy nahazo alalana, na izany aza dia naterak'izany, na inona na inona faritry ny andraikitra - fifanarahana, fampijaliana na hafa - ary na dia raha AudioSourceRE dia notoroana hevitra ny amin'ny mety hisian'ny fahasimbana toy izany. Tsy misy izany AudiosourceREtompon'andraikitra tanteraka aminao noho ny fahasimbana rehetra, fatiantoka ary antony mahatonga ny hetsika (na amin'ny fifanarahana, tort, anisan'izany ny tsy fitandremana na hafa) mihoatra ny ampahany amin'ny vola aloanao amin'ny rindrambaiko ary azo zahana amin'ny lozisialy. Ireo fetra voalaza etsy ambony dia hampiharina na dia tsy mahomby amin'ny tanjona ilaina aza ilay fanafody voalaza etsy ambony.
10. Lalàna azo ampiharina & Severability
Ity fahazoan-dàlana ity dia hitantana sy hambara mifanaraka amin'ny lalàn'ny Repoblikan'i Irlandy. Raha misy antony, dia misy fitsaram-pahefana mahefa mahita izany profahitana ity Fahazoan-dàlana ity, na ny ampahany aminy, tsy azo ampiharina, izany prony fahitana ny fahazoan-dàlana dia hampiharina amin'ny fetra farany azo avela hisy fiantraikany amin'ny fikasan'ny andaniny, ary ny ambiny amin'ity Lisansa ity dia hitohy amin'ny heriny tanteraka. Ho solon'izay dia hampiana a profahitana mitovy amin'ny resaka tsy ara-dalàna, tsy manan-kery ary tsy azo ampiharina profahitana araka izay azo atao ary ara-dalàna, manan-kery ary azo ampiharina
Ity fifanarahana momba ny fahazoan-dàlana ity dia tsy fehezin'ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana momba ny fifanekena amin'ny fivarotana entana iraisam-pirenena, izay tsy ekena mazava ny fampiharana azy.
Raha manana fanontaniana na hevitra momba an'io fahazoan-dàlana io ianao, mifandraisa AudioSourceRE DAC, Rubicon Center, Bishopstown, Cork City, Repoblikan'i Irlanda. www.AudioSourceRE.com.